नेपाली र बाँदर
कुरा २०४९÷५० साल तिरको हो । गिरिजाप्रसद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकोमा तात्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई असाध्य असहृय भइरहेको थियो । दिनहुँ जसो चक्काजाम नारा जुलुस, टायर दहन र पुत्ला दहनका कार्यक्रम त हुन्थे नै सँगसँगै सडकका रेलिङ भाँच्ने, टेलिफोनका बुथ जलाउने जस्ता काम यथेष्ट हुन्थे । एक प्रकारले नेकपा एमाले यस कुराको गुरु नै हो । त्यति खेर सडकमा भाषण गर्ने माधव नेपाल, केपी ओली, प्रदीप नेपाल, सीपी मैनालीलाई आज देख्दा म स्वयंलाई अपत्यारिलो लाग्छ के यी नेता त्यस्ता उग्र थिए होला भनेर । त्यति खेरका रेकर्डिङहरू कामरेडहरूलाई देखाइदिने हो भने आज उहाँहरूलाई कस्तो अनुभूति हुँदो हो । एक दिन एमाले समर्थक अखिलका साथीहरू र एमाले
कामरेडहरू क्रान्तिकारी उपद्रो गर्दै हुनुहुन्थ्यो रत्नपार्क क्षेत्रमा । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दा बटुवाको रूपमा हिँडिरहेको म सहितका केही मानिस एउटा फार्मेसी भित्र शरण लिन बाध्य भयौं । त्यहाँ एकजना गौरांग पर्यटक पनि थिए । उनका जिज्ञाशालाई मैले बुझाइरहेको थिएँ । यसै क्रममा आफ्नै जातिप्रति असन्तुष्ट हुँदै मैले हामीहरू (नेपाली) लाई बाँदरको संज्ञा दिए । ती पर्यटकले मलाई जवाफ लगाए– बाँदरले त आफ्नो हित र अहित बुझ्छ, तिमीहरू त आफ्नो हित पनि के हो भनी जान्दारहेनछौ । टेलिफोन जलाएपछि आफैंलाई खाँचो भएन । यस कारण तिमीहरू बाँदरभन्दा भिन्न रहेछौ । यति कुरा भनी उनले ‘सरी’ भने । मलाई बढो गुरुमन्त्र लाग्यो उनको त्यो टिप्पणी र मलाई आजसम्म पनि नेपाली र बाँदरबीचको त्यो भेद खुब जचिरहेछ ।
त्यसपछिका सरकार प्रतिपक्षी सबैले गरेका कार्यहरूको लामो सूची तयार पारौं र बाँदरले के गथ्र्यो होला र हामीले के गर्न पुग्यौं भनी समीक्षा गरे असली कुरा सबैलाई थाहा हुने नै छ । मलाई आफ्नै जातिप्रति यति विघ्न रीस उठ्ने कारण चाहिँ कोशी उच्चबाँध परियोजनामा नेपाली जनताका तर्फबाट त्यहाँ गएको प्राविधिक अध्ययन टोलीप्रतिको व्यवहार, त्यसपछि सरकराले देखाएको उदासिनता र त्यस परियोजनाको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, त्यस परियोजनाले जीवन नै आमूल परिवर्तन हुने क्षेत्रका जनताको मौनता नै हो ।
हाम्रो बाँदरभन्दा तल्लो स्तरका कार्यहरूमध्ये अरुण तेस्रो परियोजनामा राजनीतिक स्तरबाट नेकपा एमालेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदा गरेका कामहरू, जनताका नाम पद्मरत्न तुलाधर, गोपाल चिन्तन र विकास पाण्डे जस्ता एनजीओ प्यादाहरूका कार्यहरू सबैले सधैं सम्झिने कुरा हो । कोशी पहाडी क्षेत्रको विकास र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण त्यो परियोजना तुहिँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने जनता जागरुक भएर सडकमा आउनुपथ्र्यो तर आएनन् । सामाजिक जागरण, जनचेतना, विकास आदि इत्यादिमा जनतालाई सचेत गराउने सामाजिक संघ÷संस्थादेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले परियोजनामा पक्षमा एउटा जुलुससम्म गरेनन् । एउटा सामान्य दुर्घटनामा पूरा राष्ट्रको यातायात प्रणाली बन्द गर्ने नेपालीहरू त्यस परियोजनाप्रति त्यस्तो क्रियाशील देखिएनन् ।
केही समयअगाडि पश्चिम सेती परियोजना राजनीतिक विवाद भयो । आज त्यही कारणले समझदारीपत्र सम्झौता भइसक्दा पनि थ्री गर्जेज चुपचाप बसेको छ । यत्रो ठूलो परियोजना माथि संकट आइपुग्दा पनि त्यस क्षेत्रका आमजनता र सामाजिक, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले विकासका लागि दबाब दिने जनआन्दोलन गर्न सकेनन् । माथिल्लो कर्णाली परियोजनामाथि आक्रमण हुँदा पनि जनता चुपचाप रहे । न त जनतालाई अधिकारको पाठ पढाउन गाउँ÷गाउँ पुग्ने एनजीओहरूले नै यसलाई विषय बनाउन चाहे । यस्ता धेरै योजनाहरू छन् जो तुहिँदा पूरा मुलुक र त्यस क्षेत्रका जनताको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो असर परेको छ । तर, यसका उल्टा क्रियाकलाप भने यथेष्ट भएका छन् । कुनै पनि परियोजना कुनै पनि ठाउँमा गयो भने स्थानीयहरूको अधिकारको कुरा उठान गरेर त्यस्ता परियेजनाहरूमाथि दुःख दिने कार्य भने प्रसस्त भएका छन् । मैले हालसालै लिखु–४ परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थिएँ । त्यहाँको जमिनको मूल्यमा स्थानीय व्यक्तिहरूले लिएको क्षतिपूर्तिको रकम सुन्ने जो कोहीले पनि स्थानीयहरूले दृष्टिकोण र व्यवहार त्यस्ता परियोजनाप्रति कस्तो छ भन्ने जानकारी मिल्छ । पहिले पहिले यस्ता परियोजनाहरूप्रति स्थानीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू रजनताहरू अत्यन्त सहयोगी हुने गर्थे । आजकल त्यस्ता योजना स्थल थाहा पाउनासाथ सामान्य मानिसहरूका पाखाबारीलाई लिई घर बनाई परियोजनाहरूसँग बेस्कन कस्ने र मूल्य लिने पाइन्छ भनी टाठाबाठा वा नेतृत्वमा रहेकाहरू लागिपर्दछन् । त्यस्ता परियोजनाहरूलाई अधिग्रहण गरी सरकारले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने नीति नै छैन हाम्रो देशमा । राज्य निस्पृह हुने स्थानीयहरू अराजक, आक्रामक र लाभका लागि असहिष्णु हुने वातावरणले निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धन हुने त्यस्ता परियोजनाहरू निरुत्साहित भइरहेछन् ।
कुरा फेरि कोशी उच्चबाँधमा नै ठोकिन्छ । केही समयअगाडि कोही उच्चबाँध परियोजना र भारतको राष्ट्रिय नदी लिंकिङ परियोजना उपर संक्षिप्त विश्लेषण गरी नेपालले लिनुपर्ने नीति उपर केही विमर्श गरेको थिएँ । उक्त परियोजनाका लागि बजेटसमेत निकासा गरी भौगर्भिक सर्वेक्षणमा आएको भारतेली टोलीलाई जनस्तरबाट भनी लखेटिएपछि पनि भारतले वार्ताका लागि केही समय टोलीको अपेक्षा पनि ग¥यो । त्यसपछि पनि नेपालले चासो नदेखाए पछि उसले कोशी उच्चबाँधको संयुक्त अफिस नै बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, पनि नेपालको राज्य पक्ष र जनता पनि प्रतिक्रिया विहीन बसेका छन् । यस सम्बन्धमा केही पक्षहरूको पुनरुक्ति गर्नैपर्ने महसुस भयो । कोशी बाँध अर्थात् भीमनगरको बाँँधको आयु सकिँदैछ । यसको विकल्प खोज्न नेपाल हतारिनुपर्ने हो । यस परियोजनाले नेपालको अत्यन्त अहित भयो भनी भारतको आलोचना अनवरत गरिरहने नेपाली राजनीतिककर्मीहरूले अब त त्यसको विकल्प दिनुपर्ने हो । यो बाँध पनि भएन राष्ट्रघाती भयो अनि बराह क्षेत्रमा पनि बाँँध बनाउन नपाइने भनी सर्वेक्षण टोलीलाई नै कुटुँमारु गरी भगाइ दिने अनि त्यसलाई राज्यले मौन समर्थन गर्ने यो कस्तो दृष्टिकोण हो हाम्रो । के हामीलाई थाह छैन भीमनगरको पुल थलमाथि हुनासाथ पूर्वाञ्चलको लाइफ लाइन समाप्त हुन्छ भनेर । तर, पनि किन हामी हामै्र हित हेर्न सकिरहेका छैनौं ? यस परियोजनाको विद्युत् उत्पादनले राष्ट्र लाभान्वित हुन्छ, जनताले ‘लोडसेडिङ’ को मार खेप्न पर्दैन । काँकडभिट्टादेखि ठोरीसम्मको जमिनलाई सिंचाइसुविधा प्राप्त हुन्छ । हल्दियाबाट गंगा–महानन्द–कोशी पूर्वी नहर हुँदा चतरासम्म जल यातायात आउँछ । धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङको पूरा जनजीवन नै परिवर्तन हुन्छ । यी फाइदाहरूका बारेमा कसले ‘क्याम्पेन’ गर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू निरपेक्ष हुन् कथित अधिकारवादी र विकासवादी एनजीओहरू विरुद्धमा छन् । अब सामाजिक र राजनीतिक रूपले क्रियाशील जनतालाई स्वयंले यसका लागि दबाबमूलक जनआन्दोलन सुरु गर्ने बेला आइसकेको छ । यो आफ्नो समेत हितको कुरा नजान्ने÷नसोच्ने बाँदरभन्दा पनि पतित संस्कारबाटमुक्त गराउन जरुरी छ । यस बारेमा ओशोको एउटा कथन मलाई बढो घत लागेको छ । डार्बिनले भनेथे मानिस बाँदरको विकसित रूप हो तर हामीले कहिल्यै बाँदरलाई सोचेका छौं कि बाँदरले मानिसलाई के सोच्ला ? ऊ सोच्दो हो मानिस हाम्रो पतन हो ।’ वास्तवमा हामी बाँदरले जति पनि आफ्नो हितको हेक्का राख्न नसक्ने नेपालीहरू बाँदरकै पतन त होइनौं ?
अब नेपालीले जागरुक भएर विकासका लागि जनआन्दोलन सुरु गर्ने बेला आइसक्यो । सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका जागरुक जनताले यसका लागि ‘क्याम्पेन’ गर्ने र आन्दोलन सुरु गर्ने बेला भयो । जहिले पनि राजनीतिलाई मात्र मुद्दा बनाइएकोमा अब विकासको मुद्दा लिएर पनि जनआन्दोलन गरेको उदाहरण देखाउन सक्नुपर्दछ ।
Posted by arun subedi at 8:18 AM
नेपाली र बाँदर अरुणकुमार सुवेदी कुरा २०४९÷५० साल ...
Koshi High dam-1
Ultimately ,CERN has become unable to find the Hig...